कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिले किन लगाउने खोप? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिले किन लगाउने खोप?
कमला गुरुङ बिहीबार, माघ २२, २०७७, १७:२७:००
काठमाडौं- ‘डाक्टर साब! कोरोनाको खोप लगाउने होइन,?’ कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका एक चिकित्सकलाई हामीले प्रश्न गर्यौं‍।
‘म त लगाउँदिन यो खोप,’ उनले प्रतिक्रिया दिए।
ती चिकित्सकको कुरा सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्यो। फेरि ती चिकित्सकलाई प्रश्न तेस्र्यायौं, ‘किन नलगाउने खोप डाक्टर साब?’
उनको जवाफ थियो, ‘म कोरोना निको भइसकेको मान्छे। कोरोनासँग लड्न मेरो शरीरमा एन्टिबडी बनिसकेको छ। त्यसकारण मैले लगाएर एउटा खोप खेर फाल्नुभन्दा अर्को एक जनालाई लगाउन काम लाग्छ।’
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। तर केही स्वास्थ्यकर्मीले भने खोप नलगाउने निर्णय गरेका छन्।
केही स्वास्थ्यकर्मीले खोपको विरोध गरे पनि केहीले कोरोना संक्रमण निको भइसकेका कारण देखाउँदै खोप नलगाउने निर्णयलाई नै उचित ठानेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि शरीरमा बन्ने एन्टिबडीले नै सुरक्षा दिने र खोप लगाउन नपर्ने बुझाइ धेरैको छ।
तर, के कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिले खोप लगाउन आवश्यक छैन त? भाइरोलोजिस्ट डा लुना भट्टको संक्षिप्त जवाफ थियो, ‘आवश्यक छ।’
उनी भन्छिन्, ‘कोरोना संक्रमण भइसकेपछि शरीरमा एन्टिबडी बनेको छ÷छैन? बनेको एन्टिबडीले कति समयसम्म सुरक्षा दिन्छ? भन्ने थाहा छैन। त्यसैले पनि खोप लिन आवश्यक छ।’
डा लुनाका अनुसारमा शरीरमा बनेको एन्टिबडी सबैले भाइरसलाई रोक्ने क्षमता राख्छ÷राख्दैन भन्ने पनि यकिन हुँदैन। त्यही कारण पनि खोप लगाउन उनको सुझाव छ।
यदि कोरोना संक्रमण भइसकेका व्यक्तिमा एन्टिबडी बनेपछिको अवस्थामा खोप लगाए पनि शरीरलाई फाइदा नै गर्ने उनले बताइन्। उनीहरुमा खोप लगाउँदा विशेषगरी दुई किसिमको फाइदा हुन्छ।
एक, एन्टिबडी सकिएको या घटेको अवस्था छ भने लगाएको खोपले एन्टिबडीलाई बुस्ट गर्छ। दोस्रो, शरीरमा बनेको एन्टिबडीले सुरक्षा दिन सक्दैन भने खोप लगाएपछि एन्टिबडीको शक्ति बढेर जान्छ।
उनले भनिन्, ‘एन्टिबडी बनिसकेको अवस्थामा पनि खोप लगाउन मिल्छ। यसले भाइरस रोक्ने क्षमतालाई झनै बढाउँछ। त्यसैले खोप दिन मिल्छ।’
त्यसो भए संक्रमणपछिको कुन अवस्थामा खोप लगाउन मिल्दैन? खोप लगाउन नमिल्ने केही अवस्थाहरु पनि छन्।
संक्रमण भइरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन मिल्दैन। कोरोना निको भइसकेको चार हप्तापछि मात्र खोप लगाउन मिल्ने डा लुनाले बताइन्।
‘संक्रमण भएको अवस्थामा खोप लगाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘लक्षण देखिएको चार हप्तापछि मात्र खोप लगाउन मिल्छ।’
कतिपय व्यक्तिहरुमा कोरोना निको भइसकेपछि पनि विभिन्न लक्षण देखिने गरेका छन्। थकाइ महसुस गर्ने, कमजोर हुने, धेरै काम गर्न नसक्ने खालका लक्षणहरु पोस्ट कोभिडका विभिन्न लक्षणमध्येका हुन्।
कोरोना निको भइसकेका तर गम्भीर खालका लक्षण देखिएका व्यक्तिले पनि कोभिडको खोप लगाउन नहुने डा लुना सुझाउँछिन्।
‘कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिहरुमा लक्षणहरु देखिरहेका छन्। त्यसमा चाहिँ ती व्यक्तिलाई गाह्रो भइरहेको छ भने खोप नलगाउँ पनि भनिएको छ। तर हल्का माइल्ड लक्षण छ भने लगाउँदा फरक पर्दैन भन्ने पनि देखिएको छ’, उनले भनिन्।
कोभिडको पहिलो खोप लगाएको २८ दिनपछि मात्र दोस्रो डोज लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। केही कारणवश कुनै व्यक्तिले २१ दिनको अन्तरमा दोस्रो डोज लगाए सामान्य मान्न सकिने उनले बताइन्। तर २१ दिनपछि दोस्रो डोज लगाए त्यसको २८ दिनपछि तेस्रो डोज लगाउनुपर्ने उनले बताइन्।
कोभिडको खोप लगाउँदा अन्य कुनै खोप एकै साथ नलगाउन पनि उनको सुझाव छ। दुई खोपबीच कम्तीमा एक हप्ताको समय अन्तर राख्नुपर्ने उनले बताइन्।
डा लुना यसलाई यसरी प्रष्ट पार्छिन्, ‘कोभिड र हेपाटाइटिस जस्तै अन्य कुनै खोप एकै साथ लगाउन हुँदैन। यदि आज कोभिडको खोप लगाएको छ भने एक हप्ताको अन्तरमा मात्र हेपाटाइटिसको खोप लगाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार दुवै खोप एकै साथ लगाउँदा इम्युन सिस्टमले काम गर्न सक्दैन। एक अर्कालाई रोक्न खोज्छ अनि राम्रोसँग काम गर्दैन।
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित ५२ मिनेट पहिले